Home » သတင်း » VidTrans19 ညီလာခံ & ကုန်စည်ပြပွဲမှာ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ
VidTrans19 ညီလာခံ & ကုန်စည်ပြပွဲမှာ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ
အဆိုပါ VidTrans19 ညီလာခံ & ကုန်စည်ပြပွဲမှာ Artel ယင်း၏ SMART မီဒီယာ Delivery ပလက်ဖောင်းရဲ့ကွန်ယက်ကိုခံနိုင်ရည်နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရိုးရှင်းအသစ်က software ကို-သတ်မှတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူအင်္ဂါရပ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော Layer2မီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်များနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တိကျမှန်ကန်ဗီဒီယို, အသံဖိုင်ကိုဖွင်ထားတဲ့ Layer3ကွန်ယက်ကို routing ကိုစွမ်းရည်, နှင့်အချက်အလက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားအိုင်ပီ-based ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ။ ပြင်ပကွန်ရက်ကဒြပ်စင်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲအိုင်ပီကွန်ယက်ချောမွေ့စွာပူးတွဲဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း, SMART ပလက်ဖောင်းအထောက်အကူ SMPTE ST 2022: 1, 2, 5,6နှင့်7hitless switching; QoS; VLAN မှတ်သားခြင်း, နှင့်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှု။ အဆိုပါ SMART ဖြေရှင်းချက် software ကို download လုပ်မှတဆင့်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုထည့်သွင်းသို့မဟုတ်အဆင့်မြှင့်များအတွက်လွယ်ကူပြီးထိရောက်မှုပလက်ဖောင်းပေး, ဆော့ဖ်ဝဲ-enabled ဖြစ်ပါတယ်။
Artel ကိုလည်းနှင့်အတူတိုက်ရိုက် JPEG, 2000 က Ultra-အနိမျ့ latency (J2K ULL) နည်းပညာသရုပ်ပြအတွက် SMART မီဒီယာ Delivery ပလက်ဖောင်းကိုသုံးလိမ့်မည် Evertz; မြက်ချိုင့်တစ်ဦး Belden ကုန်အမှတ်တံဆိပ်; နှင့်မီဒီယာ Links များ။ အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲ VidTrans စဉ်အတွင်းပြပွဲခန်းမထဲမှာနေရာတစ်နေရာယူမည်ဖြစ်ပြီး VSF TR-01 ၏သဟဇာတ Implementation ကိုမည်ဖြစ်သည်: လေးပါးကုမ္ပဏီများသည်အကြား (နောက်ဆုံးဇွန်လဖြန့်ချိ) 2018 ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Artel/ArtelVideoSystems-SMARTMediaDeliveryPlatform.jpeg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ'' SMART မီဒီယာ Delivery ပလက်ဖောင်း™
Quarra PTP Ethernet Switch နှင့်အတူမီဒီယာကျော်အိုင်ပီများအတွက် Gap ပေါင်းကူး
အဆိုပါ VidTrans19 ညီလာခံ & ကုန်စည်ပြပွဲမှာ Artel ဟာကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ် SMPTE ST 2110 compatibility နှင့်၎င်း၏ Quarra PTP Ethernet switches များ၏ AES67 အသံ-over-IP ကိုတိကျမှန်ကန်မှုကိုစွမ်းရည်။ PTP-enabled switches များ၏ Quarra မိသားစုစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အရှိဆုံးတိကျမှုကို IEEE 1588-compliant အချိန်ကိုက်များနှင့်ထပ်တူပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ switches များထောက်ခံမှု SMPTE ST 2110 နှင့် ST 2059-2, သမားရိုးကျ genlocked SDI ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူအိုင်ပီ-based မီဒီယာကိရိယာအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြု။ သူတို့ဟာ RAVENNA AES67-အတည်ပြုခြင်းနှင့် Dante- နှင့် QSC-စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြသည်။ Quarra switches များ Audio / Video ထုတ်လွှင့်, ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေး, ဘဏ္ဍာရေး, utilities, ဆက်သွယ်ရေးနှင့်တိကျမှန်ကန်အချိန်ကိုက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ကြောင်းလုပ်ငန်းအိုင်တီ application များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Artel/ArtelVideoSystems-Quarra-10G-PTP-Ethernet-Switch-Front.jpeg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ'' Quarra 10G PTP Ethernet Switch
အဆိုပါ ARQ IP ကိုလွှစနစ်နှင့်အတူစီမံထားခြင်းမရှိသောကွန်ယက်အသုံးချ
အင်တာနက်ကျော်အရည်အသွေးမြင့်မီဒီယာများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောပေးပို့ဘို့လိုအပ်ကြောင်း, ဂြိုဟ်တု, မိုက်ခရိုဝေ့သို့မဟုတ်အခြားဘရော့ဘန်းဝန်ဆောင်မှုများအီလက်ထရောနစ်အားကစားအတွက်မြင့်တက်, အသံလွှင့်, ကျောင်းဝင်းကွန်ယက်များ, နှင့်အခြားစီးပွားဖြစ် OTT applications များပေါ်သည်။ Artel ထံမှ ARQ IP ကိုလွှ System ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောအင်တာနက်ကိုလွှပို့ဆောင်ရေး (RIST) OTT ကဗီဒီယို application များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုနဲ့ပါတ်သက်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ ARQ စနစ်၏ configuration ရိုးရှင်းသောဖြစ်တယ်, အသုံးပြုသူများသည်လျင်မြန်စွာမျိုးစုံ UDP ကို ​​unicast နဲ့ multicast န်ဆောင်မှုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါအသစ်အစီးထားရှိရန် Single-stream ကိုတိုးမြင့်မှုအတွက်စနစ်တက်စကေးနိုင်ပါတယ်။
VidTrans19 Artel Real-time ၏အသုံးပြုမှုကိုကနေတဆင့် RIST နည်းပညာသရုပ်ပြပါဝင်ပါလိမ့်မည်မှာအလှူငွေအရည်အသွေးဗွီဒီယို streams Westford, မက်ဆာချူးဆက်ထဲမှာရှိ Marina del Rey နှင့် Artel ရဲ့ R & D အဆောက်အဦများအကြားလူထုအင်တာနက်ပေါ်ကကျော်ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/Artel/ArtelVideoSystems-ARQ-IP-Streaming-System.jpeg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ'' ARQ IP ကိုလွှစနစ်
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ ဆန်းသစ်, Real-time ၏လောကဓာတ်-class ကိုပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ပါသည် မာလ်တီမီဒီယာ ကမ္ဘာ့စျေးကွက်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ပေးပို့ဖြေရှင်းနည်းများ။ ယနေ့ US မှာအများဆုံးတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်များသူတို့ရဲ့မစ်ရှင်-အရေးပါ Workflows ကိုထောကျပံ့ဖို့ Artel ထုတ်ကုန်ဖြတ်သန်း။ IP- နှင့်ဖိုင်ဘာ-based နည်းပညာများအတွက် Artel ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု 30 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုအထိချဲ့ခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, စံချိန်စံညွှန်းများ-based IP ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရလက်တွဲဖော်အဖြစ် Artel ထူထောင်ခဲ့သည်။ Artel ရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံဖြေရှင်းချက်တိကျစွာအချိန်ကိုက်, IP ကို-နှင့်ဖိုင်ဘာ-based ပါဝင်သည် မာလ်တီမီဒီယာ ဖြန့်ဝေ, ဒေတာကွန်ရက်နှင့် OTT စနစ်များကို။ Artel အနေနဲ့ဝန်ထမ်းပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.artel.com.
နှုတ်ကပတ်တော်ကို Doc သို့ Link ကို: www.wallstcom.com/Artel/190211Artel.docx
VidTrans19 ညီလာခံ & ကုန်စည်ပြပွဲ
တွစ်တာပေါ်မှာ Share: twitter.com/intent/tweet?text=Visit%[အီးမေးလျ protected]_Video%20at%20the%20VidTrans%202019%20Conference%20and%20Expo%20in%20booth%2014.%20-%20http://bit.ly/2TFAXTo
Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ညီလာခံ & ကုန်စည်ပြပွဲ အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor OTT QoS SMART မီဒီယာ Delivery ပလက်ဖောင်း SMPTE ST 2022 SoftAtHome, MStar, CES2017 ယာဉ်အသွားအလာစီမံခန့်ခွဲမှု ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် VidTrans19 VLAN မှတ်သားခြင်း	2019-02-11
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါ 2019 NAB Show မှာထုတ်ကုန်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်